waxa loo bahan yahay in shirkaduhu ay aqoonsadaan madaxbanaanida saxaafada xorta ah
Tuesday February, 25 2020 - 07:01:52
Xukuumada ayaa xeeraka sharci ee saxaafada iyo maxkamadaha madeniga ah ka kaaftoomay kolkii ay arkeen in shirkadaha isgaarsiintu u dhego nugul yihiin
In muda ah ba xukuumada Somaliland waxa ay wadey oo marxalado kala duwaan soo maray shuruucada lagu xakameynayo saxaafada xorta ah ee Somaliland.
Isku dayadaa oo qaar ka mid ahi ahaayeen qaar saxaafada iyo sharcidejinta dalku ku doonayeen nidaam waafi ah oo lagu dhaqo warbaahinta dalka isla markaana lagu kala bedbaado.
Haseyeeshee taa waxa regaadiyay, muquurin ay xukuumadu mar walba u isticmaaleysay saxaafada badax banan oo ay afka ku qabaneysay.
Dedaalada waxa berigii hore ay ku koobnaayeen xadhig iyo jirdil loogeysto saxaafada, waxa Iyana xukuumadihii kala danbeeyay ay saxaafada ku habaabin jirtay lacago laalush ah oo ay siyaan kuwa afkooda ku hadla.
Beryahan danbese waxa la arkaa xukuumada oo saxaafada u isticmaaleysa shirkadaha isgaarsiinta dalka oo si Indho la’aan ah u meel marinaya dalabyada sharci darada ah aa lagu xirayo warbaahinta.
Waxa si gaar ah loo beegsadaa warbaahinta ka waranta soo gudbisa xogta dhabta ah ee dalka ka jirta sida musuqmaasuqa.
Taa waxa dadliil inoogu filan sida sharciga baalmarsan ee Guddomiyaha Banaka dhexe u xanibay Hadhwanaag news oo dhawaan soo bandhigay aduun uu sheegay Shootali in uu lunsaday Guddomiyaha Banka dhexe ee Somaliland Ali Ibrahim Baghdadi.
Shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ayaase iminka fududeeya xanibaadaha internetka ee warbaahinta kolka ruux xukuumada ka tirsani amar sidaa ku
Xukuumada ayaa xeeraka sharci ee saxaafada iyo maxkamadaha madeniga ah ka kaaftoomay kolkii ay arkeen in shirkadaha isgaarsiintu u dhego nugul yihiin.
Hadaba dacwadaha ka dhanka ah shaqsiyaadka lidiga ku ah xoriyatul qawlka ayaa waxa lagu oogidonaa shirkadaha isgaarsiinta ee xaniba warbaahinta.
Fikirkan oo ay qabaan sharci yaqaanada saxaafada u dooda ayaa haatan ka hirgelidoona dhamaan Geeska Africa oo ah meelaha ugu xanibaada iyo xakameynta Badan dunida.
Shirkadaha isgaarsiintu waxa ay u baahan yihiin in ay la yimaadaan cadeyn ka Badan in la faray in ay warbaahinta xanibaan oo qura, waxa loo bahan yahay in shirkaduhu ay aqoonsadaan madaxbanaanida saxaafada xorta ah.
Gudaha:-Xildhibaan Qabile Oo Baaq U Diray Bulshada Degmada Sheekh Ee Gobolka Saaxil Iyo Waxa Uu Daaran yahyn
23/02/2020 - 13:03:24
"dowladdu waxay ku qasbanaatay tallaabbo adag iney qaaddo"
23/02/2020 - 08:37:46
22/02/2020 - 14:22:51